Properties for Sale in North Okkalapa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in North Okkalapa
Township North Okkalapa
🔶 မ/ဥက်ကာစကျမူ့ဇုနျ 🔶 နရောကောငျးမွနှေငျ့ဂိုဒေါငျရောငျးမညျ။
North Okkalapa | Yangon Region
🔶 မွအေကယျြ-30×150 🔶 ဂိုဒေါငျအကယျြ-30×70 🔶...
Ad Number S-10034606
🔷 ရှပေေါက်ကံစကျမူ့ဇုနျ 🔷 နရောကောငျးမွနှေငျ့ဂိုဒေါငျရောငျးမညျ။
🔷 မွအေကယျြ-40×120 🔷 မွဖေို့အုတျခတျ 🔷 ဈေးန...
Ad Number S-10028094
ပုဂံလမျးကြောကပျ 40 x 60 12 ရပျကှကျ ရမေီးဂရနျ 2RC °°°°°°°...
Ad Number S-10005808
မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ သုဓမ်မာလမျးပျေါမှာရှိတဲ့ ခွံခတျ၊ မွရှေငျးပွီးသားမွကှေကျကို...
Ad Number S-10043483
450 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10040369
Ad Number S-10039563
*** မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၂ ဈေးအနီးရှိ တိုက်ခန်း အ ရောင်း ***
Ad Number S-10037618
☃️☃️စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျကွီးမြားအတှကျ လကျရှိလုပျငနျးလညျပတျလြှကျရှိသော အဆငျ့မွငျ့...
Ad Number S-10035376
8,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10031816
မွောကျဥက်ကလာပ ဌ-ရပျကှကျ (စိုကျပြိုးရေး) လမျးမကွီးပျေါမှာ ရောငျးဖို့ရှိပါတယျ
220 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10031399
Ad Number S-10029151
၁၅၂၁ ​အောငျသ​​ပွလေမျး ၁၂ ရပျကှကျ ​​​​ရှပေေါက်ကံ (၄၅×၆၀) ​​​ထောငျ့ကှကျ ရှလှေ့ညျ့...
2,150 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10028981
ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်သည် ၂၈.၃ ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသော မြို့နယ်သည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်နှင့်လှည်းကူးမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် နှင့်မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တို့ ဝန်းရံတည်ရှိသည် ။ မြောက်ဥက္ကလာသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောမြို့သစ်စီမံကိန်းများထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည် ။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၉ ခုရှိပြီး မူလတန်းကျောင်း ၃၀ ကျောင်း ၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၇ ကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း ၅ ကျောင်းတို့ တည်ရှိသည် ။ ထူးချွန်သော ဆရာဝန်လောင်းများကို နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိသော ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) တည်ရှိသောမြို့နယ်ဖြစ်သလို ဆေး(၂) ၏ တွဲဖက်သင်ကြားရေး မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသည် မြို့နယ်၏ အာထားရသော ကျန်မာရေးစောက်ရှောက်မှု တစ်ခုဖြစ်သည် ။ သုဓမ္မာလမ်းမပေါ်ရှိ မယ်လမုစေတီတော်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းထင်ရှားသော စေတီပုထိုးများထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ယခင်က တိုးချဲ့မြို့သစ်ဖြစ်ခဲ့သော မြောက်ဥက္ကလာပသည် ယခုအခါ များစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး ဈေးဆိုင်များ ၊ ဆိုင်ခန်းများ ၊ တိုက်ခန်းများနှင့် လုံးချင်းအိမ် တို့ဖြင့်စည်ကားသောမြို့နယ်တစ်ခုအဖြစ်ရောက် ရှိလာပြီးဖြစ်သည်။